Ukubaluleka kwemidlalo yeProteas e-India - Bayede News
Ithala lisolwa ngokunqinda intuthuko yasemakhaya
UCHUNGECHUNGE lwemidlalo iProteas ezoyidlala ne-India kusuka ngeSonto kuqala ngomdlalo weT20 ngaphambi kokuqala kwemidlalo ye-ICC yobungqungqulu bomhlaba yona ezoqala zimbili kuMfumfu. Le midlalo ibaluleke kakhulu ngezizathu ezahlukene.
Ukungadlali kahle emidlalweni yeNdebe YoMhlaba ebibanjelwe e-England maphakathi nonyaka lapho elakuleli liqede endaweni yesikhombisa kulifakele ingcindezi enkulu.Ukuhlulwa yiSri Lanka ekhaya nasekuhambeni emidlalweni yobungqungqulu kuhlangene nokungenzi kahle kweyoMhlaba kusho ukuthi izinkinga azikho emidlalweni yosuku olulodwa kuphela.
Ukulungisela le midlalo iProteas ithumele u-Aiden Markram, uTemba Bavuma, uTheunis de Bruyn, uZubayr Hamza, uWiaan Mulder, u-Anrich Nortje noDane Piedt e-India ukuba bayojwayela isimo sezinkundla zakhona. Bayingxenye yeqembu lakuleli elibizwa ngokuthi iSouth African A elidlale imidlalo ne-India A kusuka ngoNcwaba. Abanye abadlali abenjengoDean Elgar noKeshav Maharaj bekade bedlala e-England bezilungiselela lolu chungechunge lwemidlalo ne-India.
Lolu chungechunge luzoqala ngemidlalo emithathu yeT20 ebalulekile ngale ndlela khona iqembu lizokwazi ukuzihlola ukuthi kumele lilungisephi njengoba lizilungiselela iNdebe YoMhlaba yeT20 ezodlalelwa e-Australia ngonyaka ozayo. INingizimu Afrika isikhombise ukukhula kulolu hlelo lwemidlalo njengoba ikleliswe endaweni yesithathu emhlabeni ngaphambi kwe-India ekleliswe endaweni yesine. Yize kunjalo egcina ukubhekana la maqembu emidlalweni yeT20 i-India yanqoba imidlalo emibili kowodwa owanqotshwa elakuleli nyakenye.
Ukulungiselela iNdebe YoMhlaba yeT20 yangowezi-2020 iProteas yenze iziguquku eziningi kufaka nokuqokwa kukakaputeni omusha uQuinton De Kock ozolekelelwa uRassie van De Dussen emidlalweni yeT20. Kuphinde kwabizwa uTemba Bavuma, uBjorn Fortuin no-Anrich Nortje okukuqala eqenjini lakuleli leT20 lokhu kulandela ukwenza kahle kwabo emidlalweni yeT20 yasekhaya. Bazofuna ukwenza kahle ukuze bazibekele indawo ngokuphelele eqenjini lesizwe babesohlwini labadlali abazolibangisa e-Australia ngonyaka ozayo.
Imidlalo ezobe ibhekwe ngamehlo abovu eye-ICC yobungqungqulu bomhlaba lapho womabili la maqembu ezobe edlala imidlalo yokuvula. Bazodlala imidlalo emithathu, lo mqhudelwano oqale kulo nyaka uyoze usongwe ngonyaka wezi-2021 lapho amaqembu amabili azoqeda ehamba phambili ezodlala owamanqamu e-England.
UFaf Du Plessis uzoqhubeka nokuba ngukaputeni weqembu lemidlalo yezinsuku ezinhlanu, uzosebenzisana noTemba Bavuma oqokelwe kwesokuba ngumsizi wakhe. Ezinye izinguquko ezenziwe kuleli qembu emveni kokushiya kwezihlabani ezithe khumu kowekhilikithi okunguHashim Amla, uJP Duminy no-Imran Tahir kube sekuqokwa abadlali abasha abenze kahle kuSunfoil Series okunguSenuran Muthusamy, u-Anrich Nortje, uRudi Seconds noDane Piedt uzoshaya ibuya kuleli qembu njengoba agcina ukulidlalela zingama-27 kuNcwaba wezi-2016 libhekene neNew Zealand eCenturion.
Asenalo ithuba lokuvuka azithathe amaProteas
IProteas ezobe iholwa umqondisi weqembu oyibamba u-Enoch Nkwe emveni kokuxoshwa kuka-Ottis Gibson kulandela ukungenzi kahle kweqembu emidlalweni yeNdebe YoMhlaba, izobhekana nomqansa onzima njengoba isazama ukuhlanganisa iqembu. Leli qembu lizobhekana ne-India ekleliswe endaweni yokuqala emhlabeni, ishisa ingabaseliwe njengoba isanda kubhaxabula i-West Indies emidlalweni emibili yezinsuku ezinhlanu eyingxenye yemidlalo ye-ICC yobungqungqulu bomhlaba. Okunye okwenza le midlalo ibenzima i-India ayikaze ihlulwe idlalela ekhaya kumasizini amahlanu edlule yagcina ukuhlulwa i-England ngesizini yowezi-2012/13 lapho yahlulwa emidlalweni emibili yanqoba owodwa. IProteas igcina ukuhambela e-India ngesizini yowezi-2015/16 yahlulwa kuyo yonke imidlalo emithathu.
UNkwe uthe bayazi babhekene nomqansa onzima, uqhube wathi, “Ngaso sonke isikhathi uma ubhekene nezikhathi ezinzima kukunika ithuba lokusebenza kanzima wenze kangcono. Siyiqembu yikho lokhu okuzosikhuthaza ukuthi sense kahle.”
Okuzonika ithemba iNingizimu Afrika ukuthi egcina ukubhekana la maqembu ngesikhathi i-India ihambele elakuleli, IProteas yanqoba imidlalo emibili yahlulwa kowodwa.
nguQhelani Msweli Sep 16, 2019